Lavt blodsukker (hypoglykæmi) - somali
Forside ›Undersøgelse og behandling›Find undersøgelse og behandling›Lavt blodsukker (hypoglykæmi) - somali
Dansk vejledning i symptomer på og behandling af lavt blodsukker oversat til somali
Baro calaamadaha lagu garto sokorta dhiigga oo hooseysa, iyo waxa aad sameyneyso, haddii ay dhacdo.
Dhammaan dadka qaba cururka sokorowga ee u qaata daawada isnsulinta waxa ay dareemaan in sokorta dhiiga dhacdo. Howl maalmeed ahaa waxaan ugu yeernaa sokorta dhiigga oo hooseysa, marka ay sokorta dhiiggu hoos uga degto wax ka yar 3,9 mmol/l.
Sidee loo dareemaa oo loo daweeyaa sokorta dhiigga hooseysa?
In sokortaada dhiigga hooseyso waxaa lagu caddeeyaa qaabab kala duwan iyadoo loo fiirinayo, sida dhacdada loo dareemo. Sokorta dhiigga oo hooseysa waxaa lagu daaweeyaa, inaad qaadatid kaarbonheydaretyada deg-degta u shaqeeya.
Sokorta macaanka ama casiir lagu kordhiyey rootiga madow waa la dooran karaa, haddii sokorta dhiigga hooseyso.
Daaweyntuse waxay ku xiran tahay, hadba sida ay kuu saameyso sokorta dhacsan.
Sokorta dhiigga hooseysa waxa loola kulmaa saddex qaab:
Dareen insulin: Waxaad dareemeysaa, in sokorta dhiiggaaga ay hooseyso, adiguna waad awooddaa inaad is-caawiso.
Waxa, ay tahay inaad sameyso: Deg-deg u qaado 15-20 gram oo kaarbonheydaret, tus: hal koob oo casiir ah, saddex-shan sokorta macaanka ama hal kaniin macaan (Hypo-fit). Cabir sokorta dhiiggaaga 10-15 daqiiqadood kadib markii aad qaadatay kaarboonheydaretyada. Haddii ay kor u soo kacday in ka badan 4 mmol/l, waxaad cuneysaa 15-20 gram oo kaarboonheydaretyo tartiib ah. – tus: hal jeex oo rootiga madow ah. Haddii sokrta dhiiggaaga aysan kor u kicin, waxaad qaadaneysaa oo dheeraad ah 15-20 gram kaarboonheydaretka deg-degga, sokorta dhiiggana waa la cabbirayaa mar kale 10-15 daqiiqadood kadib.
Xaaladda insulin: Waad soo jeedaa, laakin ma awoodid inaad wax sameyso. Waxaad u baahan tahay caawimaad.
Waxa, ay tahay inaad sameyso: Qaado 15-20 gram oo kaarboonheydaretyada deg-degga, sidoo kalena, marka ay sokorta dhiiggaaga kor u kacdo qaado, hal xabo oo rootiga madow ama rooti caadi ah si aad u dajiso. Waxaa haboon in lagaa dalbado inaad cabbirto sokorta dhiigga 10-15 daqiiqadood kadib.
Naxdinta insulin: Waad miir beeshay oo laga yaabaa inaad qallal qabto.
Waxa, dadka kale ay tahay iney sameeyaan: Haddii aad heysato GlucaGen® HypoKit, qofna aad la joogto, loo tilmaamay, sida ay tahay in loo isticmaalo, waa in lagu siiyo glucagon oo lagu duraa gudaha muruqa. Waxey qaadaneysaa qiyaasti 10 daqiiqadood, inta duritaanku ka shaqeynayo, kadibna miirka ayaa haddana kuu soo laabanaya. Duritaanka kadib waxa haboon in sokorta dhiiggaaga la cabiro 10-15 daqiiqadood oo kasta, ilaa mar kale ay ka xasileyso. Haddii aadan heysanin GlucaGen® HypoKit, waa in qof wacaa 1-1-2 una sheegaa, inaad qabto cudur sokorow/macaan, sokorta dhiiggaagu hooseyso oo aad miir beeshay.
Haddii horey aad u qabtay naxdin insulin, waxaa haboon in markaa kadib aad la xiriirto talo bixinta kal-kaaliso ee SDCC tlf: 39 68 08 00.
Waa fikrad fiican inaad dadka kale u sheegto, inaad qabto sokorow, iyo sida ugu wanaagsan oo ay kuu caawin karaan haddii dhiigga sokortaada hoos u dhaco.
Sababaha in sokorta dhiigga hooseyso
Waa muhiim, inaad taqaan sababaha suurtogalka ah ee keena in sokorta dhiigga hooseyso si aad uga hotagto, in ay dhacdo.
Waxaa kugu dhici karta in sokorta dhiigaagu hooseyso, haddii aad:
aheyd qof jirkiisa firfircooni ku qabtay, tus: shaqada beerta, nadaafad, isboorti ama galmo.
cabtay khamro. Khamradu waxaa sidoo kale ay qarin kartaa calaamadaha, sidaas darteed maba dareemeysid, marka sokorta dhiiggaagu dhacdo. Sidaas darteed waxaan kugula talineynaa, inaad u yeelato taxaddar dheeraad ah sokorta dhiiggaaga oo aad wax cunto, kahor inta aadan seexan, haddiiba aad khamri cabtay.
la xanuunsan tahay caabuqa caloosha oo lalabol leh, matag ama shuban.
si khaldan u qaadatahay insulinta deg-degta u shaqeysa halkii la rabay inaad qaadato tan sida tartiibta ah u shaqeysa ama taas caksigeeda.
aad qaadatay insulin ka baddan, intii aad qaadan jirtay.
aad qaadatay insulin xilliga raashinka kaarboonheydaret la’aan.
aad cuntay iyo/ama cabtay kaaboonheydaret ka yar inti la qorsheeyey.
aad qaadatay insulin badan wax yar ka hor intaadan cunin raashin dufantu ku badan tahay.
Sokorta dhiigga oo hoos u dhacdaa waxaa sidoo kale sababi kara habka, aad u qaadato insulinta. Weydiiso daaweeyahaaga bal inuu kuu dulmaro, sida aad u qaadaneyso insulintaada. Waxaad ka heli kartaa tilmaamaha ' Sidan ayaad u qaadaneysaa insulintaada ama GLP-1' bogga www.sdcc.dk.
Xasuuso mar walba inaad u sheegto daaweeyahaaga dhacdooyinka ku saabsan hooseynta sokorta dhiigga.
Astaamaha ugu badan ee sokorta dhiigga hooseysa:
Gacmaha oo ruxma iyo degenaansho la’aan gudaha jirka
Dareenka oo saameyn lagu yeesho
Aragga oo carqaladeysma iyo wareer
Dhidid soo deysma
Daal, madax-xanuun iyo diirad saaridda shey oo kugu adag.
Hurdada oo aan degeneyn habeenki.
Iska jir, oo ogow in calaamadaha sokorta dhiigga hooseysa inay isbedeli karaan wakhti kadib.
Gacmaha oo ruxma, dhidid soo deysma iyo aragga oo xumaadda dhammaantoo waa astaamaha dhiigga sokorta hooseysa.
Kadib marka sokorta dhiiggaagu hoos u dhacday
Haddiiba markaas kadib sokorta dhiiggaagu kaceyso (hyperglykæmi), waa inaadan sida caadiga ah qaadanin insulin dheeraad ah. Haddii sokorta dhiiggaaga hoos u dhacdo shaqo jireed aad qabatay ama khamri aad cabtay aawadeed, waa inaad iska jirtaaa inaad qaadato insulin dheeraad ah,
haddiiba sokorta dhiiggaaga markaas kadib kaceyso, maadaam aad halis ugu jirto haddana in sokorta dhiigaaga hoos u dhacdo.
Awood la’aanta inaad dareento sokorta dhiigga oo hooseysa
Dadka, qabay cudurka sokorowga sanado badan, waxey waayi karaan awoodda iney dareemaan astaamaha sokorta dhiigga oo hooseysa (waxaana loogu yeeraa ogaansho la’aan). Sidaas darteed waxay halis ugu jiraan iney ku dhacdo xaalad insulin ama naxdin insulin, oo markaa ay lagama-maarmaan noqoto iney caawimaad bannaanka ah ka helaan dadka kale, tus: ehelka, saaxiibada ama shaqaalaha caafimaad.
In badan oo ku saabsan sokorta dhiigga oo hooseysa ka akhriso www.videncenterfordiabetes.dk
Haddii aad su’aal qabto, ama shakisan tahay, kala soo xiriir Sygeplejerådgivningen tlf: 39 68 08 00 maalin walba saacadaha 08:00-16:00.